योग साधनामा सूर्य नमस्कार के हो ? स्वास्थ्यका लागि किन गरिन्छ सूर्य नमस्कार ! « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
योग साधनामा सूर्य नमस्कार के हो ? स्वास्थ्यका लागि किन गरिन्छ सूर्य नमस्कार !
१९ चैत्र २०७८, शनिबार ०८:४६
“भाष्कराय आरोज्ञं दिक्षित” । सूर्यले हामीलाई आरोग्य प्रदान गर्नु हुन्छ, अर्थात स्वस्थ पार्नुहुन्छ । हामीले सूर्यलाई देवता मानेर पुजा गर्छौं । योग साधनामा सूर्य नमस्कार निकै लोकप्रिय रहेको छ ।
आजभोलि सूर्य नमस्कार बिना योगका आसनहरु अपुरो भएजस्तै भान हुन थालेको छ । हुन त यसको विकास प्राचीन समयदेखी सूर्यलाई नमस्कार गर्नको लागि भएको हुन सक्छ । तर आधिकारिक रुपमा भवन राव श्रीनिवास राव पंतले सन् १९२० मा चरणबद्ध सूर्य नमस्कार विद्यालयमा प्रयोग गर्न लगाएको पाईन्छ । त्यसपछि विभिन्न स्कूलहरुले यसलाई परिमार्जित गर्दै लगेका छन । जसले थप उचाईमा पुर्‍याएपनि श्रेय भने वेदलाई नै दिएका छन् अर्थात सूर्य नमस्कारको व्याख्या वेदमा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
मुख्यतया सूर्य नमस्कारका १२ वटा आसनहरु रहेका छन् र एउटा चक्र पुर्‍याउनको लागि २४ पटक गर्नु पर्छ । तथापि यसका विभिन्न भिन्नता पनि रहेका छन । तर पनि शास्त्रीय सूर्य नमस्कार सर्वाधिक प्रचलनमा रहेको छ । सूर्य नमस्कार पुर्वतर्फ फर्केर दिनमा गरिन्छ भने रातमा चन्द्र नमस्कार गरिन्छ । अथवा बिहान सुर्य नमस्कार गर्दा उपयुक्त हुन्छ भने साँझ पख चन्द्र नमस्कार ।
सूर्य नमस्कार गर्नुभन्दा पहिले ध्यानदिनु पर्ने कुराहरु :
आजभोलि जीवनशैली नै दिर्घायुको कारक हो भन्ने मान्न थालिएको छ । सूर्य नमस्कारले विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ । यसमा शरीर तताउने देखि लिएर आशनको समेत अभ्यास गरिन्छ । यो निकै लाभकारी त छ तर उपयुक्त बिधि बिना गरिएमा लाभभन्दा हानी धेरै हुन सक्छ । यसका लागि हचुवाको भरमा भन्दा योग शिक्षक वा कुनैपनि विज्ञबाट सिकेर गर्दा लाभकारी हुन्छ । बिना बिधि लापरबाही तरिकाले गर्दा ढाडको तल्लो भागमा असर पर्न सक्छ । जसले गर्दा ढाड दुख्ने समस्या आउँछ । जहिले पनि सुरुवातमा अगाडि झुक्दा बिस्तारै झुक्नु पर्छ । झ्वाट्ट गर्नु हुँदैन । एकपटक अभ्यस्त भएपछि मात्र छिटो– छिटो गर्न सकिन्छ । ढाड तथा कम्मरको समस्या भएकाले अगाडि झुक्दा ध्यान दिनु पर्छ भने उच्च रक्तचाप भएकाहरुले पछाडि धेरै झुक्नु हुँदैन । षटकर्म सकेर स्नान पश्चात सूर्य नमस्कार योग गर्न उत्तम मानिन्छ । खाली पेटमा गर्दा राम्रो वा खानापश्चात कम्तिमा पनि ४ घन्टा पछि सूर्य नमस्कार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो योग आसन भन्दा पहिले गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । यसमा मन्त्रोचारणको साथमा अझ लाभकारी मानिन्छ । तीव्र गतिमा गर्दा मन्त्रको साटो बीजमन्त्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । सूर्य नमस्कारको अभ्यास पश्चात केहि समय सवासन गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
सूर्य नमस्कारका फाईदाहरु :
सूर्य नमस्कारको अभ्यासले शरीरको सम्पूर्ण प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा मजबुत पार्दछ । व्यायमको हिसाबले सूर्य नमस्कार सर्वोकृष्ट मानिन्छ । यसको अभ्यासले रगतमा अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ । शरीरलाई तताउँछ । मुटु बलियो बनाउँछ । फोक्सोलाई बलियो बनाउँछ । मोटोपन पनि घटाउन लाभकारी हुन्छ । मधुमेह जस्ता रोगहरुमा यो लाभकारी छ । त्यसैगरी सूर्य नमस्कार तनाव व्यवस्थापन तथा सम्पूर्ण शारीरिक मानसिक तथा आत्ध्यात्मिक स्वास्थ्यमा लाभकारी मानिन्छ ।
सूर्य नमसकारको अभ्यास बिधि :
सबैभन्दा पहिले सिधा उभिने र दुवै हात बगलिमा सेपिएको अवस्थामा राख्ने, यो समस्थिती हो । अब दुवै हातलाई साईडबाट कानको लाईन हुँदै छातीको भागमा ल्यायर नमस्कार गर्ने । दोस्रो स्थितिमा हातलाई तनक्क अगाडि तन्काउदै माथि तर्फ लाने र केहि पछाडी तर्फ मोड्ने । त्यसैगरी तेस्रो विधिमा बिस्तारै हात अगाडि राख्दै तल झुक्न सकिन्छ भने त्यतिखेर टाउकोले घुँडा छुन सकिन्छ । चौथो स्थिति वा विधिमा बिस्तारै बायाँ खुट्टालाई पछाडि लाने अगाडिको खुट्टा ९० डिग्रीमा हात र खुट्टा एकलाईनमा टाउको केही पछाडि लग्ने र माथितर्फ हेर्ने । पाँचौं विधिमा हातलाई नसारिकन दाँया खुट्टालाई पछाडी ल्याउने यतिखेर दुबै खुट्टा जोडिएको र कुर्कुच्चाले जमिनमा टेकेर ढाड माथि उठेको हुन्छ । यसबखत सकिन्छ भने आफ्नो नाभिमा हेर्न कोसिश गर्ने । छैठौं स्थितिमा चिउँडो छाति र घुँडाले जमिनमा राख्ने र खुट्टा जोडिएको अवस्थामा पार्ने । सातौं स्थितिमा खुट्टा जोडिएको र दुवै हात तनक्क तन्किएको अवस्थामा राखेर छातिलाई अगाडितर्फ सिधै माथि तर्फ हेरिएको र नाभिदेखि माथिको पुरैभाग उठेको अवस्थामा पार्ने ।
आठौमा घुँडा उठाएर नितम्बलाई बिस्तारै आकाशतर्फ लैजाने, हातलाई जमिनमा राखेर शरीरलाई भी आकार बनाउने । नवौंमा अस्वसञ्चालन आशन गर्ने । दशौंमा पादहस्तासन । एघारौंमा उर्धहस्तासन र बार्ह्रौं मा प्रणाम आशन । यसरी १२ स्थितिमा सूर्य नमस्कार योग गरिन्छ ।
सूर्य नमस्कार श्वास प्रश्वासको आधारमा गरिदा जहिले पनि शरीर तन्किदा श्वास लिने र शरीर खुम्चिदा श्वास बाहिर फाल्ने अर्थात प्राकृतिक रुपमै हुन्छ ।
चन्द्र कटुवालयोग साधनासूर्य नमस्कारस्वास्थ्यका लाग